यस्ता लक्षण देखिए तत्काल जचाउँनुस् मिर्गौंला – Online Saptarangi
October 8, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on यस्ता लक्षण देखिए तत्काल जचाउँनुस् मिर्गौंला
पछिल्ला वर्षमा वर्षेनी मिर्गौलाका बिरामी बढिरहेका छन् । कतिपयले त नियमित चेकजाँच नगर्ने हुँदा मिर्गौलामा समस्या देखिएको निकै पछि मात्र आफूलाई मिर्गौलाको रोग भएको थाहा पाउँछन् ।
तर, जब थाहा हुन्छ, त्यति बेला मिर्गौला निकै बिग्रिसकेको हुन्छ । त्यसो हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ, मिर्गौला ठिक छ वा छैन भन्ने कसरी थाहा पाउने त ?
यी लक्षणले चाहिँ कतै मिर्गौलामा समस्या त छैन भन्ने थाहा दिन्छ । योसँगै नियमित चेकजाँच गर्नेहरुले चाहिँ चिकित्सकलाई आफूलाई भएका समस्याबारे बताउनु पर्ने हुन्छ ।
३. सुख्खा र छाला चिलाइरहने
एक युवती र दुई दाजुभाई युवकको शव यस्तो अवस्थामा भेटियो
आज पृथ्वीका लागि दुर्लभ दिन : मंगल ग्रह अत्यन्तै नजिक आउँने, कस्तो हुन्छ यो क्षण ?
शुक्रबार कुबेर यन्त्रको पूजा गर्नाले मिल्छ धन लाभ
October 16, 2020 October 17, 2020 Prakash Waiba